कोभिड–१९ का कारण लगाइएको आपतकाल हटेपछि जापानमा के के नयाँ भयो ? – Korea Pati
कोभिड–१९ का कारण लगाइएको आपतकाल हटेपछि जापानमा के के नयाँ भयो ?
June 24, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोभिड–१९ का कारण लगाइएको आपतकाल हटेपछि जापानमा के के नयाँ भयो ?
मे २५ मा प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले जापानभर कोरोना भाइरस बिरुद्ध लगाएका आपतकाल हटाए । जापान विस्तारै कोभिड–१९ का कारण लगाइएको आपतकाल हटेपछिको अवस्थाको पहिलो चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।
अहिलेको अवस्था पहिलाको भन्दा तुलनामा धेरै कुरा फरक छ । के के फरक भएको छ ?
जापानी कर्मचारीहरु घन्टौं घन्टा कार्यालयमै बिताउँछन् । यसबाहेक उनीहरु 残業 (जान्ग्योउ –ओभरटाइम) पनि गर्छन् । क्लाइन्ट, सहकर्मी र हाकिमहरुसँग अबेर रात पिउनका लागि बाहिर जान्छन् । काम गर्ने यस्तो खालको जीवनशैली नै सफलताको संकेत हो भनेर लामो समयसम्म सोचियो ।
विश्व युद्धका कारण ध्वस्त भएको जापान विस्तारै विश्वको अर्थतन्त्र अनि प्रविधिमा उदीयमान बन्नुमा जापानीहरुको यही कार्यशैलीको ठूलो योगदान पनि छ । तर काम भनेपछि मरी मेट्ने, लामो समयसम्म कार्यालयमै बिताउने जापानीहरुको यो बानी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ ।
यस क्रममा निहोन केइजाई शिन्बुनले जापानका प्रमुख १४० कम्पनीहरुमाथि एक अनुसन्धान सर्वेक्षण गरेको छ । यस क्रममा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कम्पनीहरुले आंशिक रुपमा वा सिद्धान्ततः टेलिवर्किङ अपनाएको बताएका छन् । कार्यालयमा नगइकन समेत काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मानिसहरुले महसुस गर्न थालेका छन् । यो नयाँ पद्दति यस अघिका तुलनामा निकै लचिलो ठानिएको छ । पानासोनिक र यूनिचार्म जस्ता ठूला कम्पनीहरुले पनि रिमोट वर्क शुरु गरेपछि सञ्चार माध्यमहरुमा हेडलाइन नै बनेका थिए ।
रोजगारदाताका सकारात्मक प्रतिक्रिया
मानव संसाधन परामर्शदाता कम्पनी इमिली ड्रेकोट–जोन्सका विज्ञ बताउँछन्ः ‘कोभिडले रोजगारदाताहरुलाई टाढा गएर उत्पादकत्व कार्यालय भित्रको वातावरणमा तय गरिएको समयसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने परम्पारगत सोचाईबाट पर लगेको छ ।’ अन्तरर्वातामा संलग्न गरिएका मध्ये अधिकांशले के भनेका छन् भने कोरोना भाइरसको महामारीले उनीहरुलाई आफ्न्त विशेषगरी परिवारका सदस्यहरुसँग समय बिताउने मौका दियो ।
राष्ट्रिय जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धात संस्थानका अनुसार हरेक दिन (सप्ताहन्तका दिन बाहेक) घरको कामका लागि महिला (श्रीमति)ले औसत २६३ मिनेट खर्च गरेका छन् । पुरुष (श्रीमान)ले भने यस्तो काममा औसत ३७ मिनेट मात्रै खर्च गर्ने गरेका छन् । जापानमा कार्यालय र घर दुबैको जिम्मा महिलाको मात्रै हो भन्ने सोच्ने गरिन्छ । जापानी पुरुषहरुले घरको काममा एकदम कम समय बिताउँछन् भन्ने कुरा फ्रिलान्सर सम्पादक तथा लेखक इरिको मियामोतो बताउँछिन् ।
दूर शिक्षण – अनलाइन कक्षा-सिकाई
लामो समय सम्म रहन सक्ने अर्को नयाँ जीवनशैली दूर शिक्षण हो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जापानी विश्व विद्यालयहरुले कक्षा कोठा बन्द गरेर जूम स्काइप आदि मार्फत अनलाइन कक्षा संचालन गर्न थालेका छन् । जापानले क्रमशः सबै प्रिफेक्चरबाट आपतकाल हटाइसकेको भएपनि सामाजिक दूरी भने अझै पनि कायम गर्नु पर्छ । कार्यालयहरुमा टेलिवर्किङको बारेमा वहस चलेजस्तै विश्व विद्यालयहरुमा पनि अनलाइन कक्षा र दूर सिकाई लगायत विषयबारे बहस चल्दै आएको थियो । तर यस विषयमा खासै धेरै प्रगति भने हुन सकेको थिएन । तर कोभिड–१९ ले यो चक्रलाई निकै तीव्र बनाएको छ ।
अनलाइन कक्षाबाट कलेज र विद्यार्थी दुबैलाई लाभ भएको छ । कक्षा वा क्याम्पसमा भौतिकरुपमै उपस्थिति हुनु पर्ने बाध्यता हटेपछि विश्वविद्यालयहरुले थप भौगोलिक विविधता भएका स्थानबाट प्रध्यापकहरु भर्ती गर्न सक्छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका प्रध्यापकको भर्तीसँगै शिक्षाको स्तर पनि बढ्न छ । विद्यार्थीहरुले पनि घरबाटै लेक्चर लिन सक्छन् । यसले विद्यार्थीहरुलाई आवास स्थल नफेरिकन विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि दिन सक्छ । जापानी विद्यार्थीहरु कक्षामा भएको बेलामा पठन कार्यमा बाधा हुने हो कि भनेर चुपचाप लागेर बस्छन् । खासै धेरै प्रश्न सोध्दैनन् । तर अनलाइन कक्षाहरुमा च्याट मार्फत भने उनीहरुलाई प्रश्न सोध्न अलि सहज भएको अनुभवले देखाएका छन् । यस्ता लाभहरुले कोभिड–१९ को महामारी निमूल भएपछि पनि विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा संचालन गर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।
सर्पोर्टेड डिजिटल मञ्चको उदय
टेलि वर्किङलाई भविष्यको कार्यशैली मानिन्छ । यो प्रभावकारी, स्वच्छ, र सहज पनि छ । यसले जापानमा मात्रै होइन विश्वभर नै सर्पोर्टेड डिजिटल मञ्चको उदयलाई प्रवद्र्धन गरेका ठानिएको छ । अहिले प्रयोग गर्नका लागि अनेक टूलहरु उपलब्ध छन् । जूम, स्काइप, ह्याङ्गआउट, मिट, टिम्स आदि जस्ता अनेक अनलाइन मिटिङ एप छन् । आसाना, ट्रोलो, स्ल्याक लगायत टूल वर्किङ टूल र प्रोजेक्ट व्यवस्थापन टूल पनि छन् । छलफल गर्नका लागि भाइबर, ह्वाट्स एप, टेलिग्राम, विच्याट, जालो, मेसेन्जर, लाइन जस्ता एप छन् । सामान्यतः तपाईले जे काम अफलाइन गरिरहनु भएको छ त्यसलाई त्यही क्षण अनलाइनमा लैजान सकिन्छ ।
नगदमा कारोबार गर्दा कागजी नोटबाटै भाइरल इन्फेक्शन सर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जापानीहरु व्याप्त हुनुले नगदरहित भुक्तानीको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । हामीले यहा कुरा गर्न खोजेको मोबाइल भुक्तानी, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड ट्रान्सपोर्टेशन कार्डको उदय हो । जापानमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्ने कम्पनीमा पेपे, लाइन पे, राकुतेन पे, जे ट्रष्ट ग्लोबल आदि पर्दछन् । महामारीका कारण हजारौं पसलहरुले ‘यहाँ पेपे प्रयोग गरिन्छ’ भन्ने जस्तो सन्देश टाँस्न थालेका छन् । महामारीका कारण कागजी नोट छुन नचाहने मानिसहरु माझ स्मार्टफोनमा आधारित भुक्तानी निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । Nepali In Japan
कोरियाको अनलाईन सपिङ कम्पनी खुफाङले अवदेखी डेलिभरी गर्ने सबै सामान सेनिटाईज गरेर मात्र वितरण गर्ने !
दक्षिण कोरियामा आजमात्रै २८ कोरोना सङ्क्रमित थपिय !
कोरोना भाइरसका कारण जापानमा ३० हजार भन्दा बढि बेरोजगार
June 25, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
श्रमीक अभाव, महामारीबीच रोबोटको सहायता खोज्दै जापानी स्टोर
July 28, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
ड’ल अनुभव गर्न मिल्ने क्याफेको बि’रो ध हुँदै कोरियामा
April 18, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
प्रवासी नेपाली मञ्च दक्षिण कोरियाको समानान्तर कमिटि घोषणा : अध्यक्षमा शुभराज भोम्जन
April 18, 2021 April 18, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरियास्थित नेपाली राजदुतावासलाई मेरो प्रश्न :
April 16, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
५४ सय जनाको कोटा निर्धारण
April 15, 2021 April 15, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने